Alote Myanmar - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Food and Beverage အလုပ်အကိုင်များ
စားသောက်ဆိုင်ဝန်ဆောင်မှု Jobs in Myanmar
စားသောက်ဆိုင်ဝန်ဆောင်မှု အလုပ် 94 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
Myanmar Restaurant & Bar Management Co.,Ltd
- Bar & Restaurant လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံရှိရမည်။ - စားသောက်ဆိုင် supervisor ပိုင်းနှင့် အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည် - အသက် ၃၀ နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။
- Fusions အတွေ့အကြုံ ၃ နှစ်ရှိရမည်။ - F&B လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံရှိရမည်။
အသားရောင်းသူ | Butcher
- သက်ဆိုက်ရာ လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံ ၁နှစ်အထက်ရှိသူ။ - F&B လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံရှိရမည်။
-ဘား/ စားသောက်ဆိုင် အတွေ့အကြုံရှိဖူးသူ ဖြစ်ရပါမည်။ -ရိုးသားကြိုးစားလို စိတ်ရှိရပါမည်။ -ဗိုလ်တထောင်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး ညဘက်ထိ အလုပ်ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။ -မြိုနယ် နီးစပ်သူဆို ပိုဦးစားပေးပါမည်။ -လစာ ညှိနှိင်း
Recruiter active 10 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
စားပွဲထိုး | Waiter
-အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ -တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှဘွဲရရှိပြီးသူ (သို) ဆယ်တန်းအောင်
ပျော်ဘွယ် | မန္တလေးတိုင်း မန္တလေးတိုင်း
- သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ် ကျွမ်းကျင်မူရှိသူ -လုပ်သက်အနည်းဆုံး5နှစ်အထက်ရှိသူ -ထိုင်းလိုင်း သီးသန့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ - လူမူဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ -ပေးအပ်သောတာဝန်များအား ကျေပွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်သူ
Sous စားဖိုမှုး | Sous Chef
- သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အားကျွမ်းကျင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်သူ -လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံ အနည်း5နှစ် -ဟင်းပွဲများအား ဖန်တီးဆောင်ရွက်နိုင်သူ - ပေးအပ်သောတာဝန်များအား ကျေပွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်သူ - Thai /European/ Chinese လိုင်းအားကျွမ်းကျင်စွာချက်ပြုတ်တက်သူ -သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သူ -EC ၏ တာဝန်များကိုလည်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးနိူင်သူ -Food Cost များအား ထိန်းသိမ်းနိုင်သူ
-ဧည့်သည်များအားကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုပေးရမည် -Customer complaints များအားဖြေရှင်းနိုင်ရမည် -အစားအသောက်များအကြောင်းရှင်းပြပေးပြီးညွှန်းပေးနိုင်ရမည် -အဖွဲစည်းမှပေးသော တာဝန်များအားကျေပွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည် -ပြောဆိုဆက်ဆံမှုကောင်းမွန်ရမည်၊ -တက်တက်ကြွကြွ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်၊ -အသင်းအဖွဲနှင့်လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိရမည်၊ -experience ရှိရမည် -သွက်သွက်လက်လက်ရှိရမည်
ကော်ဖီဖျော်သူ | Coffee Maker, Barista
-Bubble Tea နဲ့ပတ်သတ်ပီး လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံ ရှိသူ -ပေးအပ်သော တာဝန်များအား တိကျ မှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်သူ -Bubble Tea နဲ့ ပတ်သတ်ပီး ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်တတ်သူ -စည်းကမ်းပိုင်းအားလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်သူ - Cost ပိုင်းအား ထိန်းသိမ်းနိုင်သူ
- Bar နဲ့ပတ်သတ်သည့် အလုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံရှိသူ(3) နှစ်ရှိသူ - အဖွဲစည်း နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ရေရှည် လက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်သူ -ပေးအပ်သောတာဝန်များအား တိကျမှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်သူ -Bar နှင့်ပတ်သတ်သည့် cost များအားထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်သူ
Kitchen Supervisor (Male)
မီးဖိုချောင်အကူ | Kitchen Helper
• မီးဖိုချောင်ဝန်ထမ်းများကို ကြီးကြပ်ပြီး အစားအသောက်များ မှာယူမှုကို စီစဉ်ပေးခြင်း • အစားအသောက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ချက်ပြုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကြီးကြပ်ပေးခြင်း။ • သတ်မှတ်ထားသော နေရာများတွင် မီးဖိုချောင်ဝန်ထမ်းများကို ခေါ်ယူလေ့ကျင့်ပေးခြင်း။ • စာရင်းဇယားအဆင့်များကို စောင့်ကြည့်ပြီး အပတ်စဉ် စာရင်းအကဲဖြတ်မှုများ လုပ်ဆောင်ခြင်း။ • ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း၊ သိုလှောင်မှုနှင့် စားသောက်ကုန်များနှင့် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ ဖြန့်ဖြူးရေးတွင် ပါဝင်နေသော အလုပ်သမားများအား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း။ • ဝန်ထမ်းများအတွက် အလုပ်အဆိုင်း(Work Shifts)များကို အချိန်ဇယားဆွဲပေးခြင်း။ • အစားအသောက်ထုတ်ကုန်အားလုံးကို ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ သိမ်းဆည်းပေးခြင်း။ • မီးဖိုချောင်သည် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီး စနစ်တကျရှိစေခြင်း။ • အပတ်စဉ်နှင့် လစဉ်ကုန်ကျစရိတ်အစီရင်ခံစာများကို ထိန်းသိမ်းခြင်း။
အသားငါး နှင့် ပင်လယ်စာများကို အရံသင့် ချက်ပြုတ်နိုင်ရန် ကျွမ်းကျင်စွာခုတ်ထစ် ဓါးကိုင်ရမည်
စားသောက်ဆိုင်အကူ | F&B Catering Assistant
-Supervisor comes in direct contact with customers. He/she must be knowledgeable about food & beverages in taking orders from customers. These orders must then be delivered to the kitchen, and the Captain must ensure that the food is delivered to customers as they have ordered it. Also, being in charge of on-site services, he/she must ensure that employees maintainaprofessional appearance so that customers can enjoyarefined experience.
အကျိုးအမြတ်: -Uniform provided -Ferry provided -Meal provided -Annual Bonus
-Responsible for serving customers directly at the restaurant. It is the most important front line position. -Assist the supervisor and serve the orders to directly to customers. -Keep informed of any reservations. -Keep all furniture’s, containers and other items at workplace clean. -Carefully observe customers until their meals are finished.
အကျိုးအမြတ်: - Uniform Provided - Meal Provided - Ferry Provided - Annual Bonus
-Responsible for serving customers directly at the restaurant. It is the most important front line position. -Assist the Captain and serve the orders to directly to customers. -Keep informed of any reservations. -Keep all furniture’s, containers and other items at workplace clean. -Carefully observe customers until their meals are finished.
အကျိုးအမြတ်: - Uniform provided - Meal provided - Ferry provided
ခေါင်းဆောင်စားဖိုမှူး | Head, Executive Chef
• ဟင်းပွဲများ၏ အရည်အသွေးနှင့်လတ်ဆတ်မှု ကိုတာဝန်ယူရမည်။ • ချက်ပြုတ်သူများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ • တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုမူဝါဒများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် ကိရိယာများကို သန့်ရှင်းရေးအတွက် စစ်ဆေးရမည်။ • ချက်ပြုတ်နည်းအသစ်များကို တီထွင်ခြင်း၊ မီနူးများစီစဉ်ခြင်းနှင့် plate presentationsများကို ရွေးချယ်ရမည်။ • Reviewing staffing levels to meet service, operational, and financial objectives. • Hiring and training kitchen staff, such as cooks, food preparation workers, and dishwashers. • Performing administrative tasks, taking stock of food and equipment supplies, and doing purchase orders. • Setting and monitoring performance standards for staff. • Obtaining feedback on food and service quality, and handling customer problems and complaints.
Recruiter active 16 hours ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
Mingalabar Myanmar Restaurant (MDY)
“မင်္ဂလာပါ” ၏သတ်မှတ်စံညွှန်းအတိုင်း တိတိကျကျလိုက်နာနိုင်ရပါမည်။ - ယခင်အလုပ်များတွင် နာမည်ကောင်းရှိရပါမည်။ - ရိုးသားကြိုးစားပြီး ဟင်းချက်လက်ရာကောင်းမွန်ရမည်။ - အဖွဲ့အစည်းရှိလူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရပါမည်။
အကျိုးအမြတ်: နေစားငြိမ်း စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ဆုလာဘ်များ
ကုန်ကြမ်းရောစပ်သူ | Pre-Mix Worker
- အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်နိုင်သူ၊ မိမိတာဝန်ကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - အသောက်အစား လောင်းကစားကင်းရှင်းရမည်။ ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းများကို လိုက်နာနိုင်ရမည်။
Recruiter active 32 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
မိမိတာဝန်ယူရမည့် အသား / ငါးများကို Hygiene & Safety ကောင်းမွန်မှုရှိအောင် ထိမ်းသိမ်းနိုင်သူ ဖြစ်ရမည် အန္တရာယ်ကင်းစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရမည်။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်၍ Teamwork လုပ်နိုင်ရမည်။
• အကင် menu ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး အသားငါးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုကောင်းမွန်စွာစီမံနိုင်ရမည်။ • အသင်းအဖွဲနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ • ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ရမည်။ • အသောက်အစား ကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။
Barista ကျွမ်းကျင် (ကျား)
Sky Inno Hub Co.,Ltd.
- လှိုင်မြို့နယ် ရှိ စား​သောက်ဆိုင်တွင်တာ၀န်ထမ်း​ဆောင်ရမည် -​ နေစားငြိမ်း (or) မနက်လာ ည​ ပြန်ရသည်
အကျိုးအမြတ်: -​ နေစားငြိမ်း
ကော့တေးများနှင့် အဖျော်ယမကာအသစ်များကို ဖောက်သည်များအား ဝန်ဆောင်မှုပေးရမည်။ ဘားနှင့် စားသောက်ဆိုင်ရှိ ဧည့်သည်များအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးရမည်။ ဟိုတယ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အရက်ယမကာနှင့် အရက်မဟုတ်သော အဖျော်ယမကာများကို ရောစပ်ခြင်း၊ အလှဆင်ခြင်း စသည် ဝန်ဆောင်မှုပေးရမည်။ ဧည့်သည်များအား မီနူးပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ပေးခြင်း၊ အော်ဒါမှာယူခြင်းနှင့် ဧည့်သည်များအား ၎င်းတို့၏လာရောက်လည်ပတ်စဉ်အတွင်း ဂရုစိုက်မှုခံစားရစေရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ ဘားကို သန့်ရှင်းသပ်ရပ်အောင်ထားရမည်။
Food Researcher (Bakery ) Shwe Pyi Thar
အစားအသောက် R&D | R&D Food, Product
ရွှေပြည်သာ | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အာရုံခံအကဲဖြတ်မှု၊ ထုတ်ကုန်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက် ကူညီပေးရာတွင် တာဝန်ယူခြင်း။ FDA၊ Halal နှင့် အခြားသော လျှောက်လွှာများနှင့် လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်းကဲ့သို့သော အစားအသောက်ဆိုင်ရာ လျှောက်လွှာများအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များ လျှောက်ထားရန် ပံ့ပိုးကူညီခြင်း။ အရောင်း၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုတို့နှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်ခြင်း။ ထုတ်ကုန်အသစ်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းအတွက်ကြီးကြပ်ရန် consumer test ပြုလုပ်ခြင်း။နှင့်ထုတ်ကုန်ကိုချိန်ညှိခြင်း။ Specification နှင့် Quality အလိုက် ၀င်ရောက်လာသောကုန်ကြမ်းများကိုစစ်ဆေးခြင်း။ ထုတ်ကုန်တိုင်း၏ ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ ပေါင်းစပ်မှုကို တွက်ချက်ခြင်း။ ဖောက်သည် ၀ယ်လိုအားနှင့်အညီလက်ရှိထုတ်ကုန်များနှင့်ထုတ်ကုန်အသစ်များကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်း။ ရှိပြီးသားထုတ်ကုန်များတွင်ကုန်ကြမ်းအစားထိုးစမ်းသပ်ခြင်း။ ကုန်ကြမ်းနမူနာ စမ်းသပ်ခြင်ပြီး ရရှိလာသောfeedbackအားManagemenဘက်သို့ replyပြန်ခြင်း ရှိပြီးသားပစ္စည်းနှင့် ကုန်ချောထုတ်ကုန်များ၏ ဓာတု၊ အသေးစားဇီဝဗေဒနှင့် အာဟာရဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် နမူနာများကို စီစဉ်ခြင်း။ နမူနာကို အတွင်းပိုင်း စမ်းသပ်ပြီး ရလဒ်ကို စီမံခန့်ခွဲရေးထံ ပေးပို့ခြင်း။ စီမံခန့်ခွဲသူထံပုံမှန်အစီရင်ခံခြင်း။ ရှိနှင့်ပြီးသား ထုတ်ကုန်အသစ်များ၏ မတူညီသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် သက်တမ်းစမ်းသပ်ခြင်း။
မုန့် နှင့်အဖျော် ဆရာ
မုန့်ဖုတ်သမား | Baker, Pastry Chef
အရသာကောင်းမွန်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းသော Cake မျိုးစုံ ကျွမ်းကျင်စွာလုပ်တတ်ရမည်။ မွေးနေ့ကိတ် ကျွမ်းကျင်ရမည်။ ကော်ဖီတွေ ၊ အအေးတွေ ကောင်းမွန်စွာဖျော်နိုင်ရမည်။ သန့်ရှင်း သပ်ရပ်ရမည်။ အသောက်အစား ကင်းရှင်းရမည်။ အကျင့်စာရိတ္တအထူးကောင်းမွန်ရမည်။
“မင်္ဂလာပါ” ၏သတ်မှတ်စံညွှန်းအတိုင်း တိတိကျကျလိုက်နာနိုင်ရပါမည်။ - ယခင်အလုပ်များတွင် နာမည်ကောင်းရှိရပါမည်။ - အဖွဲ့အစည်းရှိလူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရပါမည်။ -အချက်ပြုတ်ဝါသနာပါရမည် -ဓားကိုင်ကျွမ်းကျင် (လုပ်သက်ရှိသူဦးစားပေးမည်)
အ​ရှေ့တိုင်းဟင်းချက်ကျွမ်းကျင် Fusion (ကျား)
- လှိုင်မြို့နယ် ရှိ စား​သောက်ဆိုင်တွင်တာ၀န်ထမ်း​ဆောင်ရမည် - အ​ရှေ့တိုင်းအစားအစာကျွမ်းကျင် စွာချက်ပြုတ်နိုင်ရမည် -​ နေစားငြိမ်း (or) မနက်လာ ည​ ပြန်ရသည်
-သွက်လက်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည် -အချိန်ပိုဆင်းနိုင်ရမည် -ပစည်းများမှာပေးရမည် -သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရမည်
အကျိုးအမြတ်: စားစရိတ်ငြိမ်း အချိန်ပိုကြေး စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ဆုလာဘ်များ